अपाङ्गता भएका दर्शकहरूका लागी महोत्सवको पहुँचयुक्त्तता बारेमा जानकारी - Nepal International Theatre Festival (NITFEST) 2019
अपाङ्गता भएका दर्शकहरूका लागी महोत्सवको पहुँचयुक्त्तता बारेमा जानकारी
Latest News / By nitadmin
(निम्न कार्यक्रमहरू ब्रिटिश काउन्सिलद्वारा मण्डला थिएटर नेपाललाई प्रदान गरिएको अपाङ्गता समावेशीकरण सहयोग बाट सम्भव भएको हो।)
“समाज रूपान्तरणका लागी नाटक” को मुख्य नारा सहित यहि फाल्गुन १३-२० सम्म नेपाल अन्तराष्ट्रिय नाटक महोत्सवको संचालान हुन गईरहेको छ। यस महोत्सबमा ९ वटा देशका २८ वटा नाटकहरू प्रदर्शन हुनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ४ वटा नाटकघरहरूमा यी नाटकहरू प्रदर्शन हुनेछन्। हामीले यस नाटक महोत्सबलाई अपाङ्गता भएका दर्शकहरूका लागी पनि सके सम्म पहुँचयुक्त हुने किसिमले संचालन गर्न लागेको जानकारी गराउन पाउँदा हामी गौरवान्तित छौं।
अपाङ्गता भएका दर्शकहरूका लाई नाटक महोत्सवमा सहभागी हुन सहज होस् भन्नका लागी हामीले यो जानकारी तयार गरेका छौं। नाटक महोत्सवको समयमस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागी निम्म व्यवस्था गरिएको छ।
टिकट मुल्यमा ५०% छुट
नाटक मोहत्सव भर प्रदर्शन गरिने सबै नाटकहरूका टिकटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ५०% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। साविकको टिकट मुल्य रू. ३०० रहेको मा, यहाँहरूले आफ्नो अपाङ्गता परिचय पत्रका आधारमा यो टिकट रू. १५० मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता टिकटहरू अन्य व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने छैन।
नाटकघरको पहुँचयुक्त्ताको जानकारी:
नाटकघर पहुँचको जानकारी
मण्डला नाटकघर, अनामनगर
शिल्पी थिएटर, बत्तिसपुतली
किर्तीपुर थिएटर, राराहिल स्कुल परिसर, किर्तिपुर तल्लो तलामा रहेकाले सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज हुन्छ। आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ।
कौशी नाटकघर, टेकु ५ औं तल्लमा रहेकाले व्हिलचियर प्रयोगकर्ता र अन्य शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बाहेक अन्यलाई सहज हुन्छ। आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ।
सांकेतिक भाषाको प्रयोग
महोत्सवका केहि नाटकहरू तथा केहि अन्य कार्यक्रमहरूमा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गरिनेछ। सांकेतिक भाषाका प्रयोगले बहिरा व्यक्तिहरूलाई नाटक हेर्न सहज हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं। सांकेतिक भाषाको प्रयोग हुने कार्यक्रमको विवरण यस प्रकार छ:
कार्यक्रम मिति र समय स्थान
नाटक महोत्सवको उद्घाटन समारोह फागुन १३ गते समोबार
दिउँसो ४:३० बजे मण्डला नाटकघर अगाडीको चौर
“गैडा टाईम्स” नाटक फागुन १७ गते शुक्रबार
दिउँसो १ बजे किर्तिपुर थिएटर, राराहिल स्कुल, किर्तिपुर
“गैडा टाईम्स” नाटकका निर्देशक सँग नाटकका बारे छलफल फागुन १८ गते शनिबार
विहान १० बजे शिल्पी नाटकघर, बत्तिसपुतली
“जोखना” नाटक फागुन १८ गते शनिवार
बेलुका ६ बजे मण्डला नाटकघर, अनामनगर
“जोखना” नाटकका निर्देशक सँग नाटकका बारे छलफल फागुन १९ गते शनिवार
अपाङ्गता र नाटक बारे को प्यानल सेसन (ब्रिटिश काउन्सिल र Birds of Paradise द्वारा सहयोग प्रदान भएको) फागुन १९ गते आइतबार
दिउसो २:०० बजे -३:०० बजे सम्म मण्डला नाटकघर अगाडीको चौर
विना संवादका नाटक
नाटक महोत्सवमा देखाईने केहि नाटकहरू विना संवादका छन्। यसले गर्दा बहिरा व्यक्तिहरूलाई सांकेतिक भाषा बिना पनि नाटक हेर्न सहयोग हुनेछ। तर दृष्टिबिहिन व्यक्तिहरूलाई भने यी नाटकहरू पँहुचयुक्त नहुन सक्छ।
विना संवादका नाटकहरू यस प्रकार छन्:
नाटक मिति र समय स्थान
To Be फागुन १५ गते (दिउँसो १ बजे) किर्तिपुर थिएटर, किर्तिपुर
In Transit (India) फागुन १७ गते (दिउँसो ३ बजे) कौसी थिएटर, टेकु
पाँच (नेपाल) फागुन १८ गते ( दिउँसो ३ बजे) कौसी थिपटर, टेकु
मोक्षदा (नेपाल) फागुन २० गते (दिउँसो ४:३० बजे) शिल्पी थिएटर, बत्तिसपुतली
अपाङ्गता र नाटक सम्बन्धी कार्यशाला
यसै गरी ब्रिटिश काउन्सिल र स्कटल्याण्ड स्थित बर्ड्स अफ प्याराडाईस द्वारा यहि फागुन २१ गते देखि २५ सम्म अपाङ्गता र कला सम्बन्धी कार्यशालाको पनि आयोजना गरिदैछ। यसमा अपाङ्गता र कला क्षेत्रका व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यस कार्यशालामा भाग लिन वा यसको बारेमा थप बुझ्नको लागी यहाँ जानुहोला।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सबका आयोजकहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफूलाई सहज सबै नाटक हेर्न तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछ। यसले गर्दा आयोजकको आत्मविश्वास बढ्ने छ र आगामी कार्यक्रमहरू अझ बढी अपाङ्गता मैत्री बनाउन हामीलाई उर्जा मिल्ने छ।
यस नाटक महोत्सबमा हरेक दिन ४ वटा नाटक प्रस्तुत हुन्छन्। नाटक प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट ती नाटकका निर्देशकहरू सँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ। त्यसकारण आफूले कुनै नाटक हेर्नुभएको भए, भोलिपल्टको निर्देशकसँगको छलफल कार्यक्रममा समेत सहभागी आफ्ना राख्न हामी सबै दर्शकहरूलाई प्रोत्साहन गर्छौं।
नाटक महोत्सवको सम्पुर्ण कार्यक्रम तालिका यहाँ उपलब्ध छ: http://www.nitfest.org/schedule/category/main
यस सुचनालाई धेरै भन्दा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समक्ष पुर्याईदिनको लागी सेयर गरिदिनुहुन अनुरोध समेत गर्दछौं।
अपाङ्गता पहुँचका सम्बन्धमा कुनै प्रश्न भए वा सहायता चाहिए ९८१०३००७८२ मा सम्पर्क गर्नुहोला।
हवस् त, नाटक महोत्सब मै भेटौंला है!